I-Bombardier CRJ ifakiwe kodwa ayikho; iboniswa ku-Prepar 3d v4.5
Umbuzo I-Bombardier CRJ ifakiwe kodwa ayikho; iboniswa ku-Prepar 3d v4.5
izinyanga 4 2 Sekwedlule amaviki - izinyanga 4 2 Sekwedlule amaviki #1425 by thaiphoon
Yeka indiza enhle, u-Erik! Mhlawumbe i-jet yesifundazwe enhle kakhulu kunazo zonke.
Kuphela: Ngilande indiza, ngiyifaka nesifakeli esilula, yebo, chofoza Prepar3dI-v4 uma icelwa, kepha indiza ayivezi lapho ngivula i-Prepar.
Ngesikhathi sokufakwa ngatshelwa ukuthi kukhona ukubuyekezwa kwale AC, kodwa ngangingazi ukuthi ngingayifaka kanjani lelo fayela. Ngabe kukhona ongasiza, sicela? Ngiyabonga.
Inothi elingeziwe: Ngifake futhi ngisusele indiza izikhathi eziningana, ngaso sonke isikhathi sinomphumela omubi ofanayo. Ngibheke izibuyekezo (kuphi ukulanda ??) kodwa izibuyekezo zenzelwa ezinye izizathu.
Ukuhlela kokugcina: izinyanga ezingu-4 amasonto angu-2 adlule thaiphoon. Isizathu: imininingwane eyengeziwe ingeziwe
Ngiyabonga wathola: 25
izinyanga 4 2 Sekwedlule amaviki #1426 by rikoooo
Sicela ulande inguqulo yakamuva, njengoba usho ukuthi bekukhona isibuyekezo. Izolungisa inkinga yakho:
Umsebenzisi alandelayo (s) wathi Thank You: alinho
izinyanga 4 2 Sekwedlule amaviki #1427 by thaiphoon
Ngifisa ukukubonga ngosizo lwakho. Lokhu ukulanda okusha kwenza umsebenzi. Kumele ube yisimiso sokulinganisa indiza, njengoRoger Federer (i-compatriote) yinduna ye-tennis.
Isikhathi ukudala page: 0.643 imizuzwana